Jarmalka iyo Turkiga oo wada jir u xusay xasuuqi ka dhacay Solingen - BBC News Somali
Image caption Angela Markel oo la kulantay haweeney ka badbaadday weerar ka dhacay Solingen
Hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa si wadajir ah uga qayb galay xuska 25aad ee xasuuqa ka dhacay dalka Jarmalka iyada oo ay xiisad dibloomasiyadeed hareysay labada dal.
Madasha xuska uu ka dhacay waxay kula kulmeen dad ka badbaaday weerarkaasi.
29-ki bisha may 1993-di ayaa waxay bam gcmeed ku tuureen tageerayasha fikirka Nazi guri ay degganayaeen dad Turki ah oo u dhashay dalka Jarmalka oo ku sugna Solingen, waxaana halkaa ku dhintay laba haween ah iyo 3 gabdhood 14 qof oo kalana waa ay ku dhaawacmeen.
Xiriirka labada dal ayaa sii xumaanayey kala duwanasho dhinaca xuquuqda aadanaha oo soo kala dhex galay labada dal iyo Jarmalka oo ishortaagay codkooda iney dhiibtaan dad turki ah oo deggan Jarmalka.
Wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka ayaa wuxuu dadka Turkiga ee Jarmalka ku nool uu ka mamnuucay iney codkooda ka dhiibtan doorashada 24-ka June ka dhaceyso dalkaasi, iyada oo aan wax fasax ah laga heysan dowladda dhexena go'aankaasi la isaga gaaray.
Sida oo kale, tani iyo marki isku daygi afgambiga militari ee Turkiga ka dhacay 2016, uu dhicisoobay waxay jarmalku ay ku eedeyneysay xadgudubyo ka dhan bani aadaminimada iney turki ka jiraan, iyada oo Turkiga ku eedeysay saaxibbadiisa xulafada Nato ee yurub iney ka gaabsadeen sheegitaanka afgambiga ay ogaayeen ayna qariyeen.
Merkel waxay sheegtay waddankeeda inuu xil gaar ah uu ka saaran yahay la deggaallanka cunsuriyadda iyo neceybka gaar ahaanna lala xidhiidhiyo fikirka laga soo tagay ee Nazi.
Jarmalka oo xiray nin aragagixisonimo lagu tuhmay
Sida oo kale waxay uga mahadnaqday Mevlude Genc oo 75 jir ah oo falkaasi ka badbaadday sida ka soo horjeestay iyo dareenka geesinimada leh ee ay uga soo horjeestay 'falkaasi bani aadaminimada ka baxsan'.
Mrs Genc waxay weerarkaasi ku weyday laba gabdhood oo ay dhashay iyo laba gabdhood oo ay ayeeyo u ahayd, balse markiba waxay billaawday inay arrinta dejiso oo ay waan waan horay ka gasho, iyada oo ku baaqday 'in neceybka la joojiyo'
Waxayna intaa ku dartay: "ineysan dooneyn aarsi wax neceyb iyo colaad ahna ay u qabin cid kale, marka laga reebo afarta qof ee gurigeyga qabuuro u beddeshay" oo weerarka ka dambeysay.
Image caption Dadka weerarka lagu dilay waxaa ku jirtay gabar afar jir ahayd
Afar nin, oo ay da'doodu u dhaxeyso 16 ilaa 23 jir oo ka soo jeeda dadka jarmalka ee aragtida fog ee aaminsan fikirka 90-yadi ka jiray dalkaasi, ayaa fal dambiyeedkaasi dilka geeystay. Waxaana lagu xukumay xabsiga ugu badan dalkaa oo ah 10-15 sano oo xarig ah.
Wasiirka arrimaha dibadda Jarmlka Heiko Maas, oo ka hadlay munaasabadda looga baroordiiqaya dadki ku dhintay weerarkaasi ayaa wuxuu sheegay "dulqaad, kaladuwanasho iy bani aadaminimo ay dalkeenna iyo caalamkaba u baahan yihiin"
"waxaan rabaa inaan idiin sheego: haddaad tihiin Turkida deggan halkan idinkuma soo dhaweeyneynee, waxaad tihiin qayb ka mid ah Jarmalka, Mr Maas oo la hadlayey bulshada turkiga oo ka badan 3 million oo qof oo ku nool dalkaasi Jarmalka.
Wasiirka arrimaha Dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa wuxuu sheegay "dhammaan siyaasiyiinta iyo wariyeyaasha iney mas'uul ka yihiin iney baahin waayaan takooridda bulshada lagu hayo", waxuuna sida oo kale carrabka ku dhuftay falal noocan ah oo ay kooxdani ka sameeysay dalalka yurub wuxuuna yiri weerarka "inuusan ahayn kii ugu horreeyey balse loo baahan yahay inuu noqdo kii ugu dambeeyey"
Dalka Jarmalka ayaa wuxuu la daalaa dhacayaa la dagaallanka weerarrada isasootaraya ee cunsuriyadda iyo naceybka ku dhisan, oo ay ka mid yihiin kuwa ay geeystaan ururrda siyaasaddoodu ay fogtahay sida (AFD) ee baarlamaanka dalkaasi soo galay kaddib marki uu Jarmalka dad ka badan hal milyan oo magangalya doon ah uu qaabilay.
Muuqaal Turkey's President Erdogan's Nazi Germany taunt